मंगलबारको दिन गर्नै नहुने यी ३ काम ! – Online Sunapati
भाग्यमानीको हातमा कति ओटा शंख वा चक्र हुन्छ…..? थाहा पाउनुहोस्
अर्जुन बिक प’क्राउ परेपछि पहिलो पटक मिडिया घरमा,भाइरल बनेर के पाए अर्जुनले-भिडियो हेर्नुहोस
ज्योतिष शास्त्रः बिहीबारको दिन के गर्दा मिल्छ शुभफल ?
आज २०७७ माघ १५ गते बिहीबारको राशिफल
उपसचिव पदमा बहिनी प्रथम भाईले दोसोमा नाम निकाले
छोराछोरीलाइ माग्न पठाई आमा घरैमा लाली पाउडर गरेर बस्ने अनि बाबु मापसे गरेर बस्ने (भिडियोसहित)
बुधबार यी ५ काम गर्नुहोस्, चम्किन्छ भाग्य
श्रीमानसँग सम्बन्धविच्छेद गरेर सौतेनी छोरासँग विहे !
हजारौं ‘गोप्य’ फोटो लिक भएकी सिनिनातले पाइन दोस्री रानीको उपाधि
आज चर्चित हाँस्यकलाकार कक्रोजको जन्मदिन, धुर्मुसले यसरी दिए शुभकामना
मुख्य पृष्ठ /News/मंगलबारको दिन गर्नै नहुने यी ३ काम !
मंगलबारको दिन गर्नै नहुने यी ३ काम !
62 Less thanaminute
आज मंगलबार, हिन्दु बैदिक ज्योतिषशास्त्र अनुसार ग्रहका आधारमा बार र तिथिहरुलाई विभाजन गरिएको हुन्छ ।
शास्त्रका अनुसार मंगलबार तथा शनिबार क्रुर अर्थात पापी बारको श्रेणीमा पर्छन् । मंगलबारलाई अत्याधिक क्रुरबार मान्दै शास्त्रमा यसलाई शरीरमा रक्त सञ्चार गराउने धमनीसँग सम्बन्धित मानिएको छ ।
मानिसको शरीरमा हुने रातो पदार्थ मंगलसँग सम्बन्धित मानिन्छ । मंगलबारलाई सबै ग्रह मध्ये क्रुर र रक्तपातको ग्रह मानिएको छ । मंगलको रातो रंग मृत्यु वा रगत सँग हुन्छ । धर्म शास्त्रका अनुसार मंगलबारको दिन निम्न ३ काम गर्नै नहुने अर्थात बर्जित गरिएको छ ।
यी काम मंगलबार गर्दा तपाइँको जीवनमा समस्या बढ्न सक्छन् ।
माछा, मासु सेवन नगर्नेः
मंगलबारको दिन तपाईले माछा नखाएकै राम्रो हुन्छ । आजको दिन माछा सेवन गर्दा आर्थिक नोक्सा हुन सक्छ भने मंगलबार मासु खाँदा पनि कुटुम्बको क्षय हुन्छ ।
पशु पन्छीको बलि नदिनेः
मंगलबारको दिन पशु बलि दिने कार्यलाई अत्यन्तै खराब मान्ने गरिन्छ । यस दिन काटमार नगरेकै उचित हुन्छ । यदि काटमार गरेको यसले सन्तानमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने हुन्छ । त्यस्तै मंगलबार कुखुरा वा अन्य प‌ंक्षीको हत्या गर्दा मानिसको बुद्धी भ्रमित हुने मान्ने गरिन्छ ।
मदिरा सेवन नगर्नेः
तपाईले मंगलबारको दिन मदिरा सेवन गर्दै आइरहनुभएको छ भने त्यो पनि त्याग्नुपर्छ । मंगलबारको दिन मदिरा सेवन गर्दा तपाइँको क्रोधमा वृद्धी हुन्छ जसले अपराध समेत बढाउँछ । मंगलबार झगडा गर्दा बेइज्जत हुने विश्वास गरिन्छ ।
एकपटक मास्क नलगाउँदा यी नायिकामा देखियो कोरोनाको लक्षण
प्रदेश १ कोरोना अपडेट : मुख्य न्यायाधीवक्तासहित एकै दिन ५७ संक्रमित थपिए
सरकारलाई काम गर्न नदिएपछि ताजा जनादेशको घोषणा गरेको हुँ : प्रधानमन्त्री ओली
फेरि देशभर लकडाउन हुने !
18 hours अघि